Polisy Toniziana Nampiasa Basim-borona Nitifirana Mpanao Fihetsiketsehana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Desambra 2012 4:34 GMT
Manodidina ny 265 ireo olona naratra tamin'ny Alarobia nandritra ny andro faharoa nifandonan'ireo mpitandro ny filaminana sy ny mpanao fihetsiketsehana tao Siliana, Avaratra-Andrefan'i Tonizia. Nanomboka tamin'ny 27 Novambra ny fifandonana, raha nikarakara fitokonana faobe teny an-dalambe ireo mponina ao Siliana, faritra mahantra fadiranovana, mba hitaky ny fialan'ny governora ao an-toerana, ny fandrosoan'ny toekarena ao amin'ny faritra ary nitaky ihany koa ny fanafahana ireo mpanao fihetsiketsehana nosamborina nandritra ny fitroarana tamin'ny volana Aprily.
Ny nanaitra ny saina tamin'ity fifandonana ity dia ny fampiasan'ny polisy basim-borona nitifirana ireo mpanao fihetsiketsehana. Nanamafy i Ali Laarayedh, Minisitry ny Atitany ao Tonizia, fa nampiasa basim-borona ny polisy mba “handravana ireo asa famotehana sy fandrobàna”, hoy ny fanambarany omaly nandritra ny fandaharana resadresaka tamin'ny fahitalavi-panjakana Al-Wataniay TV 1.
Tamin'ny 28 Novambra, Sami Ben Gharbia nitatitra vaovao [ar] tao amin'ny Nawaat.org :
Araka ny voalazan'ireo nanatri-maso sy ny tatitra an-tsoratra momba ny fihetsiketsehana omaly tao Siliana, olona naratra marobe no voarakitra vokatry ny fampiasan'ireo mpitandro ny filaminana basy vaovao, izay niezaka “handrava” ny hetsika ara-tsosialy sy toekarena. Fantatra fa mampiasa basy vaovao ireo polisin'ny Minisiteran'ny Atitany Ali Laarayedh, izay melohin'ny iraisam-pirenena ny fampiasana izany, indrindra tao Bahrain.
Ben Gharbia nanampy hoe:
Nanamafy ihany koa ny fijoroana vavolombelona avy amin'ireo olom-pirenena sy ny dokotera fa nampiasa basim-borona ireo mpitandro ny filaminana Toniziana tao Siliana mba hanaparitahana ireo mpanao fihetsiketsehana ka naratra tamin'ny bala fitifiram-borona ny sasany tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana. Mitovy ny anaran'ny basy nampiasaina tao Bahrain ny basy nampiasaina tao Tonizia izay antsoina hoe “shotgun“. Basim-borona ny Shotgun.
Tovolahy roa naratra tamin'ny basy vita Italiana: Sary: Nawaat
Nitatitra ihany koa i Nawaat fa orinasa Italiana antsoina hoe Nobel Sport no mpanamboatra ity karazana basy nampiasan'ny polisy tao Siliana ity. Nandefa ny antsipirihany mombamomba ity orinasa ity i Ben Gharbia ary niantso ireo olom-pirenena Toniziana mba hanery ilay orinasa hampitsahatra ny fanondranana fitaova-piadiana tahaka izany ao Tonizia.
Nandefa lahatsary Youtube ahitana ireo olona naratra tonga avy any Siliana hoentina hotsaboina ao amin'ny toera-pitsaboana maso ao Tonizia ihany koa ny tranonkala [Fampitandremana: mampihoro-koditra ny sary]:
Nahatezitra sy nanohina ireo mpiserasera Toniziana ny fampiasana basim-borona. Tounsiahourra nisioka hoe [ar]:
Mahafantatra ve ny mpiaro ny zon'olombelona Marzouki [Filohan'i Tonizia], izay nandrombaka ny loka Chatham House [amin'ny teny anglisy] roa andro lasa izay fa lasa jamba ireo tovolahy tratran'ny bala notifirin'ireo polisy?
Mpanao gazety Toniziana Nadia Haddaoui nanatsonga [fr] ny Amnesty:
“mety hiteraka ratram-po goavana na fahafatesana ny balam-borona raha elanelana akaiky (fohy) no itifirana azy”
Selim nametraka fanontaniana lehibe [fr]:
Nahoana izy ireo no nanaiky hampiasa karazana basy tahaka izao amin'ireo Toniziana?? ratra goavana, sy fahajambana…#Siliana
Nilaza i Malek Kahdhraoui, lehiben'ny famoahan-dahatsoratra ao amin'ny Nawaat.org, fa tamin'ny volana jiona lasa teo, nampiasa karazana basy tahaka izany ihany koa ny polisy izay nitifirana ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny fampiratiana lazain'izy ireo fa “maniratsira” .
Tsy vao izao ny polisy no mampiasa basim-borona. Tamin'ny volana Jiona, am-polony ireo naratra noho izay fitaovam-piadiana izany http://nawaat.org/portail/2012/0
Naratra ihany koa ilay mpanao gazety tao amin'ny France24 David Thomson noho ny basim-borona. Nisioka ny sariny mis ny ranjony maratra izy:
Eto amin'ny hopitaly ao #Siliana aho, naratra vokatry ny basim-borona, saingy salama tsara aho izao, nisy ireo naratra mafy pic.twitter.com/SJesLq5Z
Mbola mitohy ny fitokonana faobe ao Siliana. Nandritra izany, nisy ihany koa ireo fihetsiketsehana hafa nokarakaraina tany amin'ny faritra hafa mba hanameloka ny herisetra ataon'ny polisy sy ho firaisankina miaraka amin'i Siliana.